တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နောက်ပူညစ်ရှုပ် အမြဲသေရလတ္တံ့ ဖြစ်ပါသော အကျွန်ုပ်သည် …
Posted by မေဓာဝီ at 9:41 PM
After reading your post about nasty internet service reflecting terrible Burma, I haveaquestion for you. My question may be too personal or instusive.Why are you there?
12/29/2006 8:05 AM
အင်း ဟုတ်တယ် မမေ စိတ်ညစ်တုန်း ဂျစ်ကန်ကန် လျှောက်လုပ်မိတာတွေက ပြီးလို့ နောင်တရတဲ့ အခါ ပိုပင်ပန်းတယ်။ Undo ကလည်း လုပ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒေါသမထွက်တတ်တဲ့သူ စိတ်မညစ်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အမှားတွေနဲ့ လုံးခြာလိုက်ရင်း နောင်တတွေနဲ့ နပန်းသတ်နေရတာပါပဲဗျာ။ မမေက မှားမှန်းသိရင် တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး။ အိကတော့ အဲဒိအကျင့်ကို မနည်းလုပ်ယူနေရတယ်။ အိကလေ အသုံးမကျရတဲ့ ကြားထဲ တလွဲမာနက ကြီးသေးတာ။
Can i answer your question Steve Evergreen>>> coz' we are Burma. ^_^
We're Burmese said...
Why we are at there?
We all should know the real situation. Eventhough we know that Burma is the terrible pace now, we can't run away from Burma.
When we are in oversea, we can't say we are free from that problem.
If there is the place without your people, your family, and your land, can you be happy or free all your life?
Nowaday alot burmese are changing their citizenship for avoiding this government, but not for disappointing the country and people...
We can do as we can and we can help those poor people as we can.
that's our duty..
ဟုတ်တယ် ပြောတာကောင်းတယ် ထောက်ခံတယ် We are Burmese မှန်တယ်
12/30/2006 7:48 AM
အမရေ.. ပထဆုံးအနေနဲ့ကတော့ နှစ်သစ်ကူးအတွက် ဆုတောင်းချင်ပါတယ်..ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှု အပေါင်း ရရှိနိုင်ပါစေ...
စာတွေလဲ ဒီထက်ပိုလို့ ရေးနိုင်ပါစေ...
ဖြစ်ချင်သမျှ အရာခပ်သိမ်း ဖြစ်နိုင်ပါစေ..
တပါးသူအတွက် စိတ်သောက ရောက်ရခြင်းမျိုး မရပါစေ၊ မရှိပါစေနဲ့...
အခုကွန်မန့်က ပို့စ်နဲ့ သိပ်မဆိုင်ရင်လဲ .ဆောဒီးနော်.. :P
စီဘောက်စ်မရှိလို့.. ဒီမှာ ၀င်ပြောရတာပါ
12/30/2006 6:48 PM
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အင်တာနက် အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဒီရက်ပိုင်း အသစ်မတင်ဖြစ်တာပါ။
ကိုအမြဲစိမ်းစတိဗ်ရဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကျမ ပို့စ်သတ်သတ်ရေးတင်ပါ့မယ်.
12/31/2006 5:09 PM
မမေဒါဝီ တော်တော်ရေးဖြစ်တယ်နော်။ ကျနော်လည်း အမြဲဝင်ဖတ်ပါတယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဆက်ရေးပါ။ ပျော်စရာ၊ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်သစ် ၂၀၀၇ ပါလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
1/01/2007 6:08 AM
Ya that is true , these days the network connection is very slow indeed.Some said that earth quake in Taiwan must have caused the problem and the fiber link was damage.
Regarding to Mr Steve Evergreen 's comment, I would say we love our country and people that's why we are here.
As saying goes " Home sweet home"
You can live either east or west upon your choice, depend on what your personal speculation but Home is the best.
I have no doubt that where everaBurmese on the earth will be , he is eager to hear about Burma's news, how the people live, may be he can't help too much or may be beyond his reach. However, he will not scorned to Burma.
1/01/2007 7:48 AM